Voadika ny 26 Oktobra 2018 15:56 GMT
Tezitra tamin'ny fanafihana ny Toerana masina Askariya ireo Silamo, indrindra fa ny Shitta, manamarika ny ireo bilaogera Jordaniana, mampitaha ny fihetsika tsy misy dikany nataon'ireo Miozolomana manoloana ny tsy fahombiazan'ny sariitatra Danoà amin'ny apartheid (fanavakavaham-bolon-koditra) ankehitriny mahazo ny moske 1200 taona ny sasany tamin'izy ireo. Milaza i Mazen Arafat hoe: “Aiza ny fahatezerana ara-MORALY, ny fihetsiketsehana, ny fangatahana fahitsiana fitondran-tena sy ny fahamendrehan'ny mpifanolo-bodirindrina eo amin'ireo vondrom-piarahamonina roa ireo? Nahoana no tsy misy Sonita eny an-dalambe milaza hoe: na inona na inona ahiahy mety ateraky ny fiovana fahefana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina Silamo roa, dia tezitra sy mitaky ny rariny izahay: Mahatsapa loiloy aho amin'ny tsy fisian'ny fahatafintohinana, ary faharefoana ara-moraly izay mahafantatra ny fomba fandaminana ny dikan-javatra: ny sariitatraavy amina Danoà natao mba hihomehezana sy hahavoa ny vitsy an'isa dia tsy mendrika fahatezerana ara-moraly betsaka noho ny fikasana ratsy hampisy ady an-trano amin'ny fandravana toerana masina. ” Manaiky i Haitham Sabbah: “Mahamenatra ianareo Miozolomana“. Mahamenatra fa manohitra ny sariitatra Danoà ianareo nefa mbola mihidy amin'ny sariitatra ara-nofo Olombelona/Miozolomana.” Mandritra izany fotoana izany, manontany tena i Roba Al-Assi hoe: “Nahoana no mijaly noho ny ady ara-politika ireo harena ara-maritrano ireo, izay tsy tokony ho harena Irakiana fotsiny ihany fa harena iraisam-pirenena ihany koa?”
Amin'ny lafiny iray, tony ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana mahafantatra fa efa navotsotra ilay mpamilin'ny ambasady Jordaniana nalaina an-keriny roa volana lasa, ary mivavaka ny rehetra mba ho tafaverina soa amna-tsara i Jill Carroll..
Miaraka amin'ny olan'ny tetibolam-panjakana izay noresahana ambony latabatra, nohadihadiana ny toekarena Jordaniana. Nilaza i Batir Wardam hoe: “Taorian'ny vazivazy ratsy tamin'ny latsa-bato tao amin'ny parlemanta mikasika ny tetibolam-panjakana tamin'ny herinandro lasa, tsy maintsy miaiky aho fa menatra, amin'ny maha-olom-pirenena Jordaniana sy mpifidy ahy, noho ny tsy maha-matihaninana ny fomba fiasan'ny solombavambahoaka ary mazava ho azy, ny fironan'ny ankamaroan'ny mpikambana ao aminy amin'ny endrika ivelany. ” Rami avy ao amin'ny Rami's Mirror manana fanamarihana sasantsasany momba ny toetoetry ny toekarena Jordaniana, ary i Khalaf kosa manoratra momba ny drafitry ny governemanta handany vola 50 ka hatramin'ny 60 tapitrisa dinara isan-taona mba hanampiana ireo fianakaviana manana fidiram-bola kely ho fiatrehana ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Madas mitsikera ireo olana eo an-toerana mifandraika amin'ny fahasoratam-piaro amin'ny marika sy ny fanomezan-danja ny tena, ary miteny hoe: “Mba afaka maka sary an-tsaina ve isika ary ireo izay manao ny akanjon'i Zara fa mahomby kokoa sy matihanina kokoa noho ny vehivavintsika? Nampanontany tena ahy izany raha afaka mianatra matoky ny fisantarana andraikitra ataontsika isika ary angamba ny teny majika hamahana ny olantsika manokana dia… ny fanomezan-danja kokoa ny tena! ” Toa, mahavita tsara ihany anefa ny orinasan'ny teknolojiam-baovao Jordaniana. Mitatitra momba ny Fihaonamben'ny Developera Atsinanan'i Med tamin'ity taona ity ry zalahy ao amin'ny Techhash.
Akatona eo ny resaka ny toekarena miaraka amin'ny teknolojia, andeha hifindra any amin'i Natasha Tynes, izay namoaka lahatsoratra momba ny toetoetry ny fibilaogina eo amin'ny tontolon'ny Arabo ao amin'ny G21, izay nipoaka be tamin'ny taona 2005. Tamin'ity volana ity, hetsika iray izay nipoitra avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana ny kliobam-boky antserasera Jordan Planet – miresaka momba ny tantara noforonin'i Diana Abu Jaber mitondra ny lohateny hoe Crescent [volatsinana] ireo mpikambana amin'izao fotoana izao.
Mijery ireo karazana media hafa ihany koa ny bilaogera Jordaniana. Rami Abdul-Rahman mampiseho fikarohana fampitahana momba ny fitantarana ny famonoana ilay Palestiniana Ahmad Abu-Sharia mba hampisehoana ny fomba fampiasan'ny masoivohom-baovao Afovoany Atsinanana (Palestiniana, Isiraeliana, Jordaniana ary Al-Jazeera) ireo marika sy fitenenana samihafa ho an'ny roa tonta anaty ady. Tamin'ny fehin-keviny, nilaza izy hoe: “Rehefa jerena ny fitoviana sy ny fahasamihafana eo amin'ny fitantarana ny famonoana an'i Abu-Shariah, dia azo vakiana fa misy ireo tetika ambadika ara-politika ao amin'ny tantara rehetra, afa-tsy amin'ny tranga Aljazeera TV, izay toa tsy tsikaritra loatra izay tetika ambadika izay.”